बलिउडमा फेरि अर्की २७ बर्षिया नायिकाको निधन – PathivaraOnline
Home > बलिउड > बलिउडमा फेरि अर्की २७ बर्षिया नायिकाको निधन
admin October 4, 2020 बलिउड	0
एजेन्सी । बलिउडमा फेरी अर्की एक नायीकाको निधन भएको छ । बंगाली र हिन्दी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी नायिका मिष्टि मुखर्जीको २७ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । उनी मिर्गौला सम्बन्धी समस्याको उपचारार्थ थिइन् । शुक्रबार बेलुका बेंगलुरुमा निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । मिडियामा आएको रिपोर्ट अनुसार नायिकाको अन्तिम संस्कार शनिबार गरिएको छ ।
सन् २०१३ मा फिल्म ‘मे कृष्णा हुँ’ बाट उनले बलिउड डेब्यू गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा थप समस्या आएपछि उनी किटो डाइटमा थिइन् । मिष्टि मुखर्जीको परिवारमा उनका आमा–बुवा र भाइ छन् ।फिल्म ‘मे कृष्णा हुँ’ मा डान्स नम्बर गरेपछि मिष्टि मुखर्जीले निर्देशक राकेश मेहताको फिल्म ‘लाइफ की तो लग गई’ मा काम गरिन् ।
मिष्टि मुखर्जी बोल्ड म्युजिक र आइटम नम्बर्समा निकै चर्चित थिइन् । यसबाहेक उनी थुप्रै ठूला पार्टी र कार्यक्रममा देखिन्थिन् । सन् २०१४ मा मिष्टि मुखर्जीको एउटा ठूलो विवादमा नाम मुछियो त्यसपछि मुम्बईमा उनको घरको अनुसन्धान गर्दा ठूलो परिमाणमा अ श्लि ल सिडी बरामद भएको थियो । यो मामिलामा उनका पिता र भाइलाई पक्राउ गरिएको थियो तर पछि उनलाई जमानतमा छोडिएको थियो ।
को हुन यी गुरू? जस्ले चेपाङ बस्तीमा गर्दैछन् यस्तो महान पुण्य काम! (भिडियो सहित)